BUDDHIST TERMS' Dictionary: ROBES - စီဝရ
ROBES - စီဝရ
စီဝရ - သင်္ကန်း၊ ရဟန်းသာမဏေတို့ ၀တ်ရုံသုံးဆောင်သည့် အ၀တ်အထည်။
ကိလေသာစင်သော ရဟန္တာအရှင်မြတ်တို့၏ အလံတံခွန် (အရဟတ္တဓဇ)ဟုလည်း ခေါ်ဆိုသည်။ သစ်ခေါက်ပြုတ်ရည်ဖြင့် ဆိုးရသောကြောင့် ဖန်ရည်ဆိုးသောအ၀တ် (ကာသာဝ)ဟုလည်း ခေါ်သည်။ လူအနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပင် သင်္ကန်းဝတ်ဆင်ထားသော ပုထုဇဉ် ရှင်သာမဏေကို အရိုအသေပြုရ၏။ လမ်းခရီး၌ စွန့်ပစ်ထားသော မစင်လိမ်းကျံနေသည့် သင်္ကန်းကိုပင် လူနတ် ဗြဟ္မာဝတ္တ၀ါတို့ လက်အုပ်ချီမိုး ရှိခိုးထိုက်၏။ သင်္ကန်း၌ မမြင်ရသော ဂုဏ်သတ္တိထူးများ တည်ရှိနေသည်။ လူ့ဘ၀ဖြင့် ရဟန္တာဖြစ်သူသည် ယုတ်ညံ့သော လူ့အသွင်ဖြင့် မနေနိုင်။ ရဟန္တာဖြစ်သောနေ့မှာပင် သင်္ကန်းဝတ်ရုံ၍ ရဟန်းပြုမှ အသက်ရှည်ကြာစွာ နေနိုင်၏။ ရဟန်းမပြုခဲ့လျှင် ထို့နေ့မှာပင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရ၏။ သင်္ကန်းသည် သာသနာကွယ်ခြင်း၊ မကွယ်ခြင်း၏ အမှတ်အသားတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ သင်္ကန်းတစ်ထွာ, တစ်ညှို ၀တ်ရုံထားလျှင်ပင် ရှိခိုးခံထိုက်၍ သာသနာတည်နေသေးသူဟု ဆိုရ၏။ ထိုသာသနာကို (လိင်္ဂသာသနာ) အသွင်သာသနာဟု ခေါ်သည်။ ၀တ်ရုံသူသည်လည်း လိုချင်မှုမရှိအောင် အ၀တ်အထည်အကောင်းကိုပင် လယ်ကွက်များကဲ့သို့ဖြစ်အောင် ချုပ်စပ်၍ အရောင်တစ်မျိုးတည်းဆိုးထားသည်။ သင်္ကန်းချုပ်ရန် အ၀တ်အထည်ကောင်း မရရှိလျှင် အမှိုက်ပုံ သူသေကောင် စသည်တို့မှ ကောက်ယူ ဖွတ်လျှော်၍ ချုပ်စပ်ဝတ်ရုံ ရသည်။
သင်္ကန်းသည် အချုပ်အားဖြင့် သုံးထည်ရှိသည် -
(၁) သံဃာဋိ - ဒုကုဋ် (နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီး)၊
(၂) ဥတ္တရာသင်္ဂ - ကိုယ်ရုံဧကသီ၊
(၃) အန္တရ၀ါသက - ကိုယ်ဝတ်သင်းပိုင်။
အခြားလဲလှယ်စရာ အပိုမထား၊ မျက်နှာသုတ်ပ၀ါ, စောင် စသည်မရှိ။ ဤသင်္ကန်းသုံးထည်မျှဖြင့်နေသော အကျင့်ကို “တေစီဝရိက ဓုတင်္က - တိစီဝရိက်ဓုတင်” ဟုခေါ်သည်။
Dyed robes worn by bhikkhus and samaṇeras
The monastic robes are also referred to as ‘the banner of the arahats’, arahattadhaja, and being dyed with the substance obtained from the bark of trees, they are called “kᾱsᾱva”. The sanctity of the robes is such that, evenalay-disciple of the Non-Returner status has to pay his respects toanovice, and that evenadirty, discarded robe is worthy of being accorded homage by gods and men.
A lay person who attains arahatship can no longer assume lay appearance but dons the robes on the very day of attainmentor otherwise will pass away the same day.
The robes are alsoasymbol of the existence of the teaching. Even if the day should arrive when onlyascrap of the robe is symbolically worn asamark of bhikkhuhood on the person thewearer should be paid homage to, and it can be said that the Teaching is still extant. With the aim of keeping the wearer from becoming attached to it and others from wanting to possess it, robes are dyed throughout with the same colour and even if there be sufficient cloth to be made intoarobe, it is deliberately cut into small pieces first so that the finished robe isapatchwork of squares resemblingapaddy-field.
If there is no clean cloth to be made intoa robe, the approved practice is to collect discarded cloth from rubbish heaps and dead bodies, and after washing and dyeing them, to patch these up intoarobe.
A set of monastic apparel consists of three pieces: an undergarment called antaravᾱsaka, an upper robe called uttarᾱsaṅga and the great robe of two layers called saṁghᾱti. The ascetic practice of Tecῑvarika dhutaṅga calls for using onlyasingle set of three robes to the exclusion of other items such as towels and blankets.